December | 2014 | linyeikhtin
၁ နှစ်မြောက်- စက္ကူရတု
၂ နှစ်မြောက်- ဂွမ်းရတု
၃ နှစ်မြောက်- သားရေရတု
၄ နှစ်မြောက်- ပိုးရတု
၅ နှစ်မြောက်- သစ်သားရတု
၆ နှစ်မြောက်- သကြားရတု
၇ နှစ်မြောက်- သက္ကလပ်ရတု
၈ နှစ်မြောက်- ကြေးရတု
၉ နှစ်မြောက်- ဥဿဖုရားရတု
This entry was posted in မှတ်စု on December 19, 2014 by linyeikhtin.
မကျက်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာကို တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ရင်း
ရွက်ကြွေတစ်ရွက်ပေါ် “မူး လဲ ကျ ကွဲ…။”
This entry was posted in ကဗျာ on December 16, 2014 by linyeikhtin.
This entry was posted in ကဗျာ on December 1, 2014 by linyeikhtin.